Trent Alexander-Arnold oo Kordhiyay joogistiisa Liverpool | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Trent Alexander-Arnold oo Kordhiyay joogistiisa Liverpool
Trent Alexander-Arnold oo Kordhiyay joogistiisa Liverpool
Posted by: Mahad Mohamed January 19, 2019
Himilo FM – Daafaca Liverpool Trent Alexander-Arnold ayaa qandaraas cusub oo muddo dheer ah u saxiixay kooxda hoggaanka u heysa Premier League.
Alexander-Arnold, oo yimid da’yarta Liverpool isagoo 6 jir ah kahor inta uusan ku bilaaban kulankiisii ​​ugu horreeyay bishii October 2016, ayaa heshiis shan sanno ah u saxiixay Anfield oo ku eg illaa 2024ka.
20 jirkan ayaa noqday dooqa 1aad ee daafaca middig Jurgen Klopp, waxaana uu qeyb ka ahaa sannadkii hore Koobka Adduunka isagoo ku jiray kooxda Gareth Southgate ee England.
“Anigu waan ku faraxsanahay waana ku faanayaa” ayuu Alexander-Arnold yiri.
“Waxaan dareemayaa inaan mudnaanta siiyay taageerada iyo kalsoonida kooxda ay iigu jirto inay i siiso heshiis cusub.”
Alexander-Arnold ayaa saxiixay qandaraas muddo dheer ah xagaagii 2017, laakiin horumarka uu sameeyay 18-kii billood ee la soo dhaafay ayaa la filayaa inay sabab u tahay heshiiska cusub.
Xaqiijinta go’aanka Alexander-Arnold ayaa imaanaysa laba maalmood kaddib markii Liverpool ay daafaca kale ee Andy Robertson uu sidoo kale saxiixay heshiis cusub oo 2024-ka ah.
Daafacaan ayaa door muhiim ah ka ciyaaray Liverpool inay hoggaanka u heyso Premier League, iyadoo 18 guul ka heshay 22 kulan , afar dhibcood oo nadiif ah ayayna ka saraysaa kooxda difaacanaysa horyaalka ah ee Manchester City.
Alexander-Arnold ayaa la filayaa inuu seego kulanka Liverpool ay la ciyaari doonto Crystal Palace Sabtidan iyadoo dhaawac jilibka ah uu la maqan yahay.
Waxa uu kooxda koowaad ka ciyaaray 67kulan Liverpool ,waxa uu dhaliyay Afar Gool lkn waxa uu ku guulaystay in uu 5jeer matalo qarankiisa goolkiisa 1aadna uu u dhaliyay wadankiisa kulankii ay 3-0 kaga badiyeen United States ee ka qabsoomay Wembley November-tii ugu danbeysay
Previous: La kulan – Tima jaraha 6 jirka ah ee u xiira haweenka!
Next: Chelsea oo ku dhaw inay la soo wareegto Leandro Paredes
Mauricio Pochettino ka tagay shaqadii kooxda Paris Saint-Germain
Manchester City oo beddelka Raheem Sterling u aragta Serge Gnabry